【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】အပူဒဏျ အန်တရာယျ နှငျ့ သကျသာစရေနျ နညျးလမျးမြား | Opinion Leaders
ယခုကာလသညျ အလှနျပူပွငျးသော နှကောလဖွဈသညျ။ မတျလ ဧပွီလ မလေမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ အပူခြိနျ အမွငျ့ဆုံးကာလမြားဖွဈသညျ။ ရနျကုနျ၏ အပူခြိနျသညျ နလေ့ညျဘကျ တှငျ ၄၃ ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျလောကျထိ အလှနျမွငျ့မားနသေညျ။ နောကျရကျပိုငျးအတှငျး ၄၅ ကနေ ၄၆ ဒီဂရီစငျတီဂရိတိလောကျထိ မွငျ့တကျနိုငျကွောငျး ခနျ့မှနျးကွတယျ။ ယခငျက အပူခြိနျ တကျနှုနျးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရငျ ယခငျက ၁ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျ တကျဖို့ ၁၀ နှဈ ကွာပါတယျ။ ယခု ၃ နှဈတာကာလ အတှငျးမှာတငျ ၂ ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျ လောကျထိ မွငျ့တကျလာပါတယျ။ ဒီလို အပူခြိနျမွငျ့တကျလာခွငျးက လူတှရေဲ့ ကနျြးမာရေး အထူးသဖွငျ့ အသကျအရှယျကွီး သူတှဟော အပူဒဏျကို မခံနိုငျတာကွောငျ့ ထိုသူတှမှော အသကျအန်တရာယျ ထိခိုကျနိုငျသညျအထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီအပတျမှာတော့ အပူဒဏျကွောငျ့ ဘယျလို ကနျြးမာရေး ဆိုးကြိုးတှေ ရှိနိုငျလဲ၊ ဘယျလိုကုသရမလဲ ဆိုတာ ပွောပွပေးမှာပါ။
ပူပွငျးလှနျးတဲ့ ရာသီဥတုက ခြှေးထှကျလှနျခွငျးကို ဖွဈစပေါသညျ။ ခြှေးထှကျလှနျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှာရှိတဲ့ ရနေဲ့ဓာတျဆားတှလြှေငျမွနျစှာဆုံးရှုံးစတောကွောငျ့ ဒီလို အခကျြတှေ ဖွဈစပေါတယျ-
(၁)ခန်ဓာကိုယျဖောယောငျခွငျး (Heat Edema)
(၂)မိတျဖု၊ ယားနာမြားထှကျခွငျး (Heat Rashes)
(၃)ကွှကျတတျခွငျး (Heat Cramps)
(၄)အပူဒဏျကွောငျ့ ပငျပနျးနှမျးနယျမှုလှနျကဲခွငျး (Heat Exhaustion)
(၅)သတိလဈမမြေ့ောပွီး အပူရှပျခွငျး (Heat Stroke) တို့ဖွဈစပေါတယျ။
ဒီလက်ခဏာတှေ ရှိရငျ ဘယျလို ပွုစုကုသမလဲ?
သှေးလှညျ့ပတျမှုအားနညျးလာတဲ့ လူကွီးပိုငျးအရှယျတှမှော ပိုတှရေ့တတျပွီး ခွထေောကျပိုငျးကို မွှငျ့ပေးထားတာ၊ ခွလေကျအကှေးအဆနျ့ မကွာခဏလုပျပေးတာ၊ လမျးလြှောကျပေးတာ မြိုးတှေ လုပျပေးရပါမယျ။
အရပွေားကို အေးမွစတေဲ့ ရအေေးပတျတိုကျခွငျး၊ ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြ၊ သနပျခါး၊ Calamine ဆေးရညျလူးပေးခွငျး ဖွငျ့ သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ ဓာတုပစ်စညျးမြားပါတဲ့ ခရငျမျမြားက ခြှေးပေါကျပိတျပွီး အဖုတှေ ပိုဆိုးစတေတျလို့ ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။
ကွှကျသားမြားကိုညငျသာစှာနှိပျနယျပေးခွငျး၊ ရဓေါတျပွနျလညျ ဖွညျ့တငျးပေးမယျ့ ရေ၊ သဈသီးဖြျောရညျ၊ ဓာတျဆားရညျ စတာတှကေိုသောကျပေးရပါမယျ။
(၄, ၅)အပူဒဏျကွောငျ့ ပငျပနျးနှမျးနယျမှုလှနျကဲခွငျး (Heat Exhaustion) နှငျ့ သတိလဈ မမြေ့ော ပွီး အပူရှပျခွငျး (Heat Stroke)
ခြှေးထှကျလှနျခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ကွှကျတကျခွငျး၊ ပြို့အနျဝမျးလြှောခွငျး၊ ဆီးအရောငျ ရငျ့ခွငျး၊ ကယောငျကတမျးဖွဈခွငျး၊ သတိလဈမမြေ့ောခွငျး စတာတှဖွေဈလာရငျတော့ အေးမွ သောနရော လအေေးပေးစကျရှိတဲ့နရော ရှခွေ့ငျး ထူထဲသော အဝတျအစားမြား ခြှတျပေးခွငျး၊ ရေ (သို့) ဓာတျဆားရညျ (ORS) မြား တိုကျခွငျး၊ လူနာရဲ့နဖူး၊ လညျပငျးနဲ့ ခြိုငျးကွား၊ ပေါငျခွံမြား တှငျ ရအေေးပတျတိုကျပေးခွငျး စတဲ့ ရှေးဦးပွုစုနညျးတှေ ပွုလုပျပွီး နီးစပျရာ ဆေးရုံ ဆေးပေး ခနျးသို့ အမွနျဆုံးပွသဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ယခုကာလသည် အလွန်ပူပြင်းသော နွေကာလဖြစ်သည်။ မတ်လ ဧပြီလ မေလများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပူချိန် အမြင့်ဆုံးကာလများဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်၏ အပူချိန်သည် နေ့လည်ဘက် တွင် ၄၃ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်လောက်ထိ အလွန်မြင့်မားနေသည်။ နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်း ၄၅ ကနေ ၄၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတိလောက်ထိ မြင့်တက်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းကြတယ်။ ယခင်က အပူချိန် တက်နှုန်းတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် ယခင်က ၁ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် တက်ဖို့ ၁၀ နှစ် ကြာပါတယ်။ ယခု ၃ နှစ်တာကာလ အတွင်းမှာတင် ၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် လောက်ထိ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဒီလို အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းက လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီး သူတွေဟာ အပူဒဏ်ကို မခံနိုင်တာကြောင့် ထိုသူတွေမှာ အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင်သည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာတော့ အပူဒဏ်ကြောင့် ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်လဲ၊ ဘယ်လိုကုသရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးမှာပါ။
ပူပြင်းလွန်းတဲ့ ရာသီဥတုက ချွေးထွက်လွန်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ချွေးထွက်လွန်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ရေနဲ့ဓာတ်ဆားတွေလျှင်မြန်စွာဆုံးရှုံးစေတာကြောင့် ဒီလို အချက်တွေ ဖြစ်စေပါတယ်-
(၁)ခန္ဓာကိုယ်ဖောယောင်ခြင်း (Heat Edema)
(၂)မိတ်ဖု၊ ယားနာများထွက်ခြင်း (Heat Rashes)
(၃)ကြွက်တတ်ခြင်း (Heat Cramps)
(၄)အပူဒဏ်ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလွန်ကဲခြင်း (Heat Exhaustion)
(၅)သတိလစ်မေ့မျောပြီး အပူရှပ်ခြင်း (Heat Stroke) တို့ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေ ရှိရင် ဘယ်လို ပြုစုကုသမလဲ?
သွေးလှည့်ပတ်မှုအားနည်းလာတဲ့ လူကြီးပိုင်းအရွယ်တွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပြီး ခြေထောက်ပိုင်းကို မြှင့်ပေးထားတာ၊ ခြေလက်အကွေးအဆန့် မကြာခဏလုပ်ပေးတာ၊ လမ်းလျှောက်ပေးတာ မျိုးတွေ လုပ်ပေးရပါမယ်။
အရေပြားကို အေးမြစေတဲ့ ရေအေးပတ်တိုက်ခြင်း၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်၊ သနပ်ခါး၊ Calamine ဆေးရည်လူးပေးခြင်း ဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းများပါတဲ့ ခရင်မ်များက ချွေးပေါက်ပိတ်ပြီး အဖုတွေ ပိုဆိုးစေတတ်လို့ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ကြွက်သားများကိုညင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ ရေဓါတ်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးမယ့် ရေ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဓာတ်ဆားရည် စတာတွေကိုသောက်ပေးရပါမယ်။
(၄, ၅)အပူဒဏ်ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုလွန်ကဲခြင်း (Heat Exhaustion) နှင့် သတိလစ် မေ့မျော ပြီး အပူရှပ်ခြင်း (Heat Stroke)
ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဆီးအရောင် ရင့်ခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း၊ သတိလစ်မေ့မျောခြင်း စတာတွေဖြစ်လာရင်တော့ အေးမြ သောနေရာ လေအေးပေးစက်ရှိတဲ့နေရာ ရွှေ့ခြင်း ထူထဲသော အဝတ်အစားများ ချွတ်ပေးခြင်း၊ ရေ (သို့) ဓာတ်ဆားရည် (ORS) များ တိုက်ခြင်း၊ လူနာရဲ့နဖူး၊ လည်ပင်းနဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံများ တွင် ရေအေးပတ်တိုက်ပေးခြင်း စတဲ့ ရှေးဦးပြုစုနည်းတွေ ပြုလုပ်ပြီး နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ ဆေးပေး ခန်းသို့ အမြန်ဆုံးပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။